Ahiana Androahana Ireo Tompontany Ao Amin’ny Nosy Panay Ny Fananganana Ny Tohodrano Lehibe Jalaur Ao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2016 13:12 GMT
Iraky ny Firaisankina iraisam-pirenena mihaino ireo lehilahy sy vehivavy Tumandok mijoro vavolombelona ao Barangay Agcalaga, Calinog. Sary: Hetsi-bahoaka ho an'ny Renirano Jalaur.
Miatrika ny mety ho fanerena handao ny fonenany ireo Tumandok (Panay-Bukidnon) fokonolona tompontany ao afovoan'ny nosy Panay ao Filipina noho ny fananganana ny Tohodrano Lehibe ao Jalaur izay hamela ireo vondrom-piarahamonina tompontany ao amin'ny Kaominina Calinog, Iloilo ho ao anaty rano .
Fantatra ihany koa amin'ny hoe Tetikasa Ho An'ny Tanjona Maro Ao Amin'ny Renirano Jalaur Dingana Faharoa (JRMP II) ny tetikasa izay inoana fa hamindra olona Tumandok 17.000 ary miantraika amin'ny vondrom-piarahamonina tompontany 16 izany. Ho diboky ny rano ireo trano sy tany fambolena ao Tumandok amin'ny fananganana ny tohodrano.
Ireo no hitan'ny Iraka Firaisankina Iraisam-pirenena na International Solidarity Mission (ISM) nanomboka tamin'ny 16 ka hatramin'ny 18 Jolay izay nokarakarain'ny An'ny Hetsi-bahoaka ny Renirano Jalaur. Nandray anjara tao amin'ny ISM ny Delegasiona avy amin'ny fikambanana 26 solonten'ny firenena dimy, anisan'izany Belzika, Alemaina, Italia, Filipina, ary Korea Atsimo.
Nitety ireo vondrom-piarahamonina tompontany voakasika mivantana amin'ny fanorenana ny tohodrano manamorona ny Reniranon'i Jalaur ao Calinog ny solontenan'ny ISM , niresaka tamin'ireo manam-pahefana ao an-toerana ary nifanakalo hevitra tamin'ny sampan-draharaham-panjakana voakasik'izany ao an-tànanan'i Iloilo.
Ny dihy Binanog notanterahana nandritra ny Tumanduk 2016 nga Mangunguma nga Nagapangapin sa Duta kag Kabuhi (TUMANDUK) Fivoriambe natao tao Tapaz, Capiz tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Sary: TUMANDUK.
Nanaovana lanonana ny fangadiana ny Tohodrano Lehibe Jalaur izay natrehan'ny Filoha Noynoy Aquino teo aloha tamin'ny Febroary 2013 ary nahazo fampindramam-bola manokana avy amin'ny Export Import Bank ao Korea, sy famatsiam-bola avy amin'ny governemanta Filipina.
Nanosika ny hananganana ny tohodrano lehibe Jalaur mba ho vahaolana amin'ny fanomezana fitarihan-drano sy rano madio fisotro ao amin'ny Nosy Panay ny governemanta Filipiana. Na izany aza, milaza ireo mpitsikera fa azo atao izany amin'ny alalan'ny fanorenana tohodrano kely kokoa sy ny fanavaozana ny rafitra fitarihan-drano izay efa misy ary tsy mila fandravana ireo vondrom-piarahamonina tompontany .
Dr. Ernesto Hofileña , dokotera mpanao fanatoranana misotro ronono sy mpamboly avy ao Iloilo, ohatra, nandresy lahatra fa tsara kokoa ny fanitarana lehibe kokoa ny fitobian-drano 1500 kilometatra toradroa izay manangona orana sy rano mikoriana noho ny fanorenana tohodrano lehibe manokana izay tsy misy afa-tsy fitobian-drano 107 kilometatra toradroa .Hoy izy nanoratra :
The average annual output of the Jalaur River is 1,197,504,000 cubic meters. If we can save this using a series of small dams, reservoirs, and deep lateral canals crisscrossing the farmlands across the Iloilo plain we won’t need a high dam with a storage capacity of less than a billion.
Eo ho eo amin'ny 1.197.504.000 metatra toratelo eo ny hadirin'ny Reniranon'i Jalaur isan-taona. Raha afaka manangona izany isika amin'ny alàlan'ny tohodrano kely maromaro, sy ny fitoeran-drano ary lakandrano lalina mifanila manavatsava ny tany fambolena manerana ny lemaka Iloilo dia tsy mila tohodrano lehibe manana fitobian-drano latsaky ny arivo tapitrisa .
Fifanarahana teo amin'ny fanamboarana
Saritany Tumandok fandravana sy famindran-toerana noho ny fananganana ny Tohodrano Lehibe Jalaur . Sary: Renirano Jalaur ho an'ny Hetsi-bahoaka.
Tsy araka ny filazan'ny governemanta sy ny ao an-toerana hoe nanohana ny tetikasa ny ankamaroan'ny vahoaka tompontany, nahita ireo iraka iraisampirenena fa tsy nisy fanekena malalaka, mialoha na mazava (FPIC) azo avy amin'ny Tumandok tamin'ny fanorenana ny tohodrano lehibe Jalaur.
Voalohany aloha, nitatitra ny ISM fa efa natolotra ho an'ny Korea Eximbank tamin'ny Novambra 2011 ny fanadihadiana fahafaha-manorina ny tohodrano nataon'ny Fitantanana Nasionaly ny Tari-drano. Talohan'ny fanombohana ny dingana voalohany FPIC tamin'ny Janoary 2012 izany.
Nahita ihany koa ny ISM fa ny tombontsoan'ny fanorenana ny Tohodrano Lehibe ihany no noresahana ary nafenina ny voka-dratsiny nandritra ny “dinika fivoriambe” nokarakarain'ny Vaomiera Nasionalin'ny Vahoaka Tompontany .
Ankizy milalao manamorona ny reniranon'ny Jalaur ao Barangay Agcalaga, Calinog.
Nomena fampanantenana onitra ireo vondrom-piarahamonina voakasik'izany mba hanohana ny tetikasa, raha ireo izay nanohitra kosa norahonana sy nampitahorin'ireo mpitandro filaminam-panjakana .
Berna Castor, mpitarika ny vondron'ny vahoaka tompontany Tumanduk nga Mangunguma nga Nagapangapin sa Duta kag Kabuhi (TUMANDUK), nilaza fa tsy nifidy ireo zokiolona izay niombon-kevitra hananganana ny tohodrano ireo vondrom-piarahamonina iray manontolo, ary nikarakara izany ireo manam-pahefana mba ahazoana rariny tamin'ny tetikasa. Hoy i Castor :
Yes, they are Tumandok. But they are those whose lives and livelihood are not directly affected by the project. The people who will be most affected by the project do not approve of the project.
Marina fa Tumandok izy ireo. Kanefa izy ireo no anisan'ny manana fiainana na asa fivelomana tsy voakasika mivantana amin'ny tetikasa . Ary tsy mankasitraka ny tetikasa ireo vahoaka izay tena voakasiky ny tetikasa .
Niresaka tamin'ny delegasion'ny ISM ireo Tumandok lehilahy sy vehivavy nizara ny ahiahiny ny amin'ny tondra-drano sy ny fihotsahan'ny tany izay mety hateraky ny tohodrano ary eo ihany koa ny trano sy ny tanànan'izy ireo izay mety ho tondraky ny rano indrindra fa ireo tany fambolena sy ireo vakoka ara-kolontsaina .
Ho voazimbazimba amin'ny fanorenana ny tohodrano ireo fasana sy toerana masina Tumandok enina manamorona ny Reniranon'i Jalaur , araka ny fikarohana fanadihadiana naseho nandritra ny ISM nataon'i Mar Anthony Balani sy Jude Mangilog mpianatra nahazo diplaoma tao amin'ny Oniveriste Visayas ao Filipina .
Antso hanaovana hetsika sy ny tolo-kevitra
Delegasionina avy amin'ny Iraka Firaisankina Iraisam-pirenena manavatsava ny renirano Jalaur .
Tafiditra tamin'ny antso nataon'ny iraka iraisam-pirenena ho an'ny hetsika ny antso ho an'ny governemanta Filipiana mba hanaja ny zon'ny Tumandok amin'ireo vakoka nentim-paharazana sy ny fizotry ny fanapahan-kevitra tsy asiana faneriterena, kolikoly ary fitaka avy amin'ny sampan-draharahan'ny governemanta sy ny miaramila.
Mitaky ny fampitsaharana ny hery famoretana atao amin'ny vondrom-piarahamonina tompontany ny iraka ary mitaky fanadihadiana momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay natao mba hanerena ireo Tumandok hanaiky ny tetikasa. Mitaky onitra noho ny fahasimbana ho an'ireo niharam-boina mandritra ny fampiharana ny tetikasa ihany koa izy ireo .
Nandrisika ny famerenana ny fandinihana ireo tetikasa fampandrosoana rehetra izay manimbazimba ny vakoka nentim-paharazan'ny mponina Tumandok ihany koa ireo iraka iraisam-pirenena ary manao antso ho an'ny governemanta Koreana Atsimo, ilay mpampindram-bola, mba handinika indray ny olana manodidina ny tohodrano.
Farany, nanolo-kevitra ny hanaovana fanadihadiana mahaleotena ny iraka mba hanombanana ny fahafaha-mamelona ateraky ny fanolorana Tohodrano Lehibe Jalaur sy ny fandinihana raha mety ny fanatanterahana amin'ny fomba hafa toy ny fanorenana ny tohodrano kely fanangonan-drano izay azo antoka kokoa rehefa manome fitarihan-drano ho an'ny tany fambolena .
2 andro izayShina
3 andro izayMyanmar (Birmania)